Andalusian प्रान्त (I) प्रति एक महल | यात्रा समाचार
कारमेन गुइलन | | स्पेन शहरहरू, कोर्डोबा, Huelva, के हेर्ने, sevilla, यात्रा
अन्डालुसियामा बस्न सुविधा छ, वा कम्तिमा यो परिदृश्य र सुन्दर ठाउँहरूको सन्दर्भमा हो जुन हामीसँग धेरै नजिक र नजिक छ। र यदि त्यहाँ केही छ जुन हाम्रो प्रियमा प्रशस्त छ Andalusia, यो निस्सन्देह महलहरू छ। ईतिहासले तिनीहरूलाई हामी समक्ष ल्याए र हामी उनीहरूलाई ठूला निर्माणहरू जोगाउन हर सम्भव गर्दछौं।
आज यस लेखमा, म ल्याउँदै छु, मेरो भूमि देखाउन Andalusian प्रान्त प्रति एक महल। मँ अधिक धेरै उल्लेख गर्न सक्छु, तर मँ तपाईंलाई तृप्ति गर्न चाहान्दिन। यी of वटा महलहरू हुन् जुन हामी यस डबल लेखमा उल्लेख गर्नेछौं, प्रत्येक प्रान्तबाट, जुन मैले छनौट गरेको छु जुन तपाईं दक्षिणी स्पेनमा के छ के बारे अझ थोरै जान्न सक्नुहुन्छ।
1 Huelva मा Niebla को महल
2 सेभिलको अल्काजार
3 Almodóvar डेल रियो को कर्ल्ड, कोर्डोबा
4 सान फर्नान्डो (Cádiz) मा सान्ती पेट्रीको महल
Huelva मा Niebla को महल
केही महिना अघि मैले तपाईलाई यस महललाई संदर्भित गर्दै एक लेख ल्याएको थिएँ जुन तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तर यदि तपाईं यसको बारेमा अझ सारांश केहि चाहनुहुन्छ भने, पढिरहनुहोस्।
निबला कुनै समय एक शक्तिशाली टेफा राज्य थियो। यो राज्यले अझै हामीलाई छोडिदियो, केहि भयानक पर्खाल र महल जो उत्सुकताको साथ पुनः निर्माणको समय पछि निर्माण गरिएको थियो।
एल कास्टिलो डे नीब्ला, वा यसलाई पनि चिनिन्छ Guzmanes को महल यो अल्मोहद मूलको विशाल पर्खाल घेरा भित्र अवस्थित छ। भित्ताहरूमा नै निब्लाका आफ्नै बासिन्दाहरूको घर पनि छ। यो महलले भूकम्पबाट जोगाएको छ, स्वतन्त्रताको युद्धको बेला घेरामा परेको घेरा, र अवश्य पनि समयको अनुभवहीन समय। तर यसको पर्खालहरू बलियो छन्, केहि त्यस्तो चीज जो पर्यटकहरूलाई अत्यन्तै प्रभाव पार्छ जो यसलाई हरेक दिन आउँदछन्।
El सेभिलको अल्काजार यो सेभिलको राजधानीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मध्ये एक हो। निर्माणहरूको यो प्रभावशाली सेट बीचमा निर्माण गरिएको थियो १० औं र १ XNUMX औं शताब्दी र यो १ greatest औं शताब्दीको मध्यमा मुडेजरले यस्तो महल दिए कि यो आजको दृष्यमा देख्न सकिन्छ भनेर राजा पेद्रो १ को समयमा यो सबैभन्दा ठूलो महिमामा पुग्नेछ।
अल्फोन्सो एक्स, क्याथोलिक मोनार्क्स वा कार्लोस वी, जो कोही यसको पर्खाल भित्र बसोबास गर्नेहरू थिए र जसले थोरै आफ्नो सजावट र निर्माणलाई प्रत्येक युगको कार्यकुशलता र स्वादको साथ सानो बनाएका थिए। विचारहरूको यस विविधता उल्लेखनीय मौलिकता र विशाल को एक सेट मा परिणाम भयो शैलीगत विविधता.
कुनै श doubt्का बिना, यदि तपाईं सेभिल भएर जानुहुन्छ भने अवश्य भवन।
Almodóvar डेल रियो को कर्ल्ड, कोर्डोबा
मुस्लिम मूल को यो महल, थियो बारम्बार पुनर्निर्माण गरियो y २० औं शताब्दीको सुरूमा पुनर्स्थापना गरियो। यो स्पष्ट छ गोथिक-मुडेजर शैली यसलाई Andalusia को सब भन्दा दर्शनीय महल बनाउँछ। यसको संरक्षणको राम्रो राज्यको कारण र ती काल्पनिक महलहरूको वास्तविक र विशिष्ट उपस्थिति भएको कारण हामी सबै कल्पना गर्छौं।
सहरको शीर्षमा उभिएर, तपाईं यसको युद्धभूमिबाट कर्डोभन गाउँको सुन्दर दृश्यहरूको साथसाथै यसको आँगनहरू र कोरीडोरहरूमा हिंड्न सक्नुहुन्छ र यसको भव्य टावरहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ: वर्ग, गोलाकार र श्रद्धालु।
सान फर्नान्डो (Cádiz) मा सान्ती पेट्रीको महल
यो अनौठो महल हो रक्षात्मक सुदृढीकरण सैन फर्नांडो, Cádiz को एक टापु मा स्थित छ। तपाईंको भ्रमण अनौंठो हुन सक्छ किनकि तपाईं यो अद्भुत शहरको राम्रो बालुवा समुद्री किनारमा नुहाउँदा तपाईं अर्कोतर्फ यो ठूलो निर्माण देख्न सक्नुहुनेछ। केहि चीज जुन केवल केहि धेरै चयनित स्थानहरूमा अनुभव गर्न सकिन्छ। को वाच टावर टावर छ पुरानो निर्माणकिनकि यो १ 1610१० को हो, र बाँकी निर्माणहरू, जस्तै पर्खाल र घेराको भित्री भाग १ the औं शताब्दीको हो।
यस महलको भ्रमण अनौंठो अनुभव हुन सक्छ विशेष गरी ग्रीष्म inतुमा, त्यहाँ असंख्य समुद्रीतट मार्गहरू छन् र त्यहाँ त्यहाँ भ्रमणहरू छन्। थप रूपमा, शहर मैले देखेको सब भन्दा स्वागतकारी मध्ये एक हो।
यदि तपाईं यस दुबै लेखमा चयन गरिएका बाँकी महलहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, उही समान शीर्षकको साथ अर्को पढ्नुहोस्। यसमा हामी more वटा महलहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं, तर यस पटक मालागा, ग्रेनाडा, जान र अल्मेर्ना प्रान्तहरूमा। कुन हुनेछ? के तपाइँसँग तपाइँको मनपर्ने छ? म गर्छु, र त्यसो भए म तपाईंलाई जानकारी दिनेछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » Andalusian प्रान्त (I) प्रति एक महल